18 December, 2018 in Wararka by Baidoanews Webmaster
waxaa magaalada guri kasta albaabkiisa ladhigey caawa Gaare iyo ciidan ethiopia ah kuwaasoo berito loo diyaariyey in qofkii iskudaya inuu ka hadlo waxa lagu maleegayo Madaxtooyada lagu handado.
ciidanakaan ayaa waxaa kaabaya oo garab istaagan ciidankii xamar laga keeney oo diyaar u ah qofkii dhaq dhaqaaq lidi ku ah laftagaran ay ciqaabaan ayagoo ah kuwa aan u tureynin dadka deegaanka oo laga keeney xamar si ay u maquuniyaan Rabitaanka Shacabka.
xildhibaanda ayaa dhamaantood waxaa lagu wargeliyey iney caawa madaxtooyada usoo hoydaan kii imaan waayana lagu ari doono liiska koxda argagxisada, waxaana diyaar ah bedelkii u codeyn lahaa oo meesha fariisan lahaa, waxaa magaalada baydhabo saaka ilaa shalay kusoo qul qulayey Boqolaal dad aan deegaanka u dhalan oo xamar ka imaanayey kuwaasoo maanta carwooyinka baydhabo loogu wada iibiyey dharka loo yaqaano Suudadka.
International community.ga ayaa horey waxay ushaaciyeen ineysan marnaba taageereynin wax alaale wixii kasoo baxo waxa loogu yeerey doorashada Baydhabo, sidoo kale beesha dowlado badan ayaa arinkaa gaashaanka u daruurey waxayna sidoo kale amreen in 24saac lagu soo daayo Mukhtaar Roobow wadaadka shacbiyada leh laakiin Farmaajo waa uu diidey warkaasi.
waxaa lagu wadaa in beri Laftagaran loo caleema saaro laakiin waxaa is weydiin mudan in weli xabsiada Baydhabo ay ka buuxaan dhalinyero , abwaaniin, odoyaal iyo gabdho qaarkood ilmooley ah kuwaasoo loo soo xirey maxaad u banaanbaxeysaan oo fikirkiina udhiibaneysaan laakiin suaasha ayaa ah yaa la xukumi doonaanaa
Wabiga Shabeelle oo ku fatahay magaalada Baladweyne
Brakac Obama oo dhaliil adag usoo jeediyay Madaxweyne Donald Trump